Pioneer ကုမ္ပဏီမှ တင်သွင်းသောအလူမီနီယံလှေကားသည် ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်အဆော က်အအုံသုံးပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး လက်သမားများအတွက်သာမန် အမြင့်၁၆ပေခန့် ထိတက် နိုင်သော ဆောက်လုပ်ရေးသုံး ပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။လှေကားရဲ့အရောင်ကာလာမှာ လည်း ငွေရောင်ဖြစ်သောကြောင့် အစွန်းထင်အပေတေခံပါသည်။လူကြီးမင်းတို့ ၏နေအိမ် များတွင်လည်းအသုံးပြုရလွယ်ကူပါသည်။ဒါ့အပြင်လှေကားမှာအသုံးပြုပြီး ခေါက်သိမ်းထား နိုင်ပါသည်။လူကြီးမင်းတို့ အတွက်အသုံးပြုပြီး သိမ်းဆည်းရန်လွယ်ကူသော အလူမီနီယံလှေ ကားကို အသုံးပြု ဝယ်ယူလိုပါက Pioneer ကုမ္ပဏီကို ဆက်သွယ်မှာယူနိုင်ပါသည်။
Steel Coil or finished product Roofing Sheet
35000 ~ 35000 Kyats
Golden Rose Furniture ကုမ္ပဏီမှ လူကြီးမင်းတို့ အတွက် အရည်သွေးကောင်းမွန်သော စတီးလ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့် ပန်းကန်စင် ( Plate Stand ) ကို လူကြီးမင်းတို့ အတွက် ထုတ်လုပ် ဖြန့် ဖြူးရောင်းချ လျက်ရှိပါသည်။ ၄င်းပစ္စည်းများသည် သေသပ်လှပပီး ကြာ ရှည်အသုံးခံပါသည်။ ဒါ့ကြောင့် လူကြီးမင်းတို့ အနေဖြင့် ၄င်း စတီးလ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့် ပန်းကန်စင် ( Plate Stand ) ကို ဝယ်ယူအသုံးပြုလိုပါက Golden Rose Furniture ကုမ္ပဏီကို တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ် မှာယူနိုင်ပါသည်။
30000 ~ 30000 Kyats
Golden Rose Furniture ကုမ္ပဏီမှ လူကြီးမင်းတို့ အတွက် အရည်သွေးကောင်းမွန်သော စတီးလ်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် အိမ် ထမင်းစားခန်းသုံး ပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်သည့် ထမင်းစားပွဲ ( Dinner Table Set ) ကို ထုတ်လုပ်ဖြန့် ဖြူး ရောင်းချလျက်ရှိပါသည်။၄င်း ထမင်းစားပွဲ သည် အရည်သွေးကောင်းမွန်သော စတီးလ် ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် သေသပ်လှပပီး ကြာရှည် အသုံးခံသည့်အပြင် အသုံးပြုရ လွယ်ကူပါသည်။ ဒါ့ကြောင့် လူကြီး မင်းတို့ အနေဖြင့် ၄င်း ထမင်းစားပွဲကို ဝယ်ယူအသုံးပြုလိုပါက Golden Rose Furniture ကုမ္ပဏီကိုတိုက်ရိုက် ဆက်သွယ် မှာယူနိုင်ပါသည်။
<p>ရန်ကုန်မြို့ရှိ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးများ Decoration &amp; Construction Services လုပ်ငန်းရှင်များအတွက်</p><p>- ပစ္စည်းတူရင် ဈေးသပ်သာရမယ်။</p><p>- ဈေးတူရင် ဝန်ဆောင်မှုကောင်းရမယ်။&nbsp;</p><p>- ယုံကြည့်စွာနဲ့ ဝယ်ယူငှားရမ်းအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။</p><p>- ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး ငြမ်းပိုက်များ Scaffolding Swivel Coupler နှင့် ဆက်စပ် ပစ္စည်းမျိုးစုံကို ဝယ်ယူ ငှါးရမ်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ.....</p><p>ကျွန်​​တော်​တို့ Empire မှ လူကြီးမင်းတို့၏ လုပ်ငန်းခွင်သုံး Scaffolding Sales &amp; Rental Services, Formwork Accessories &amp; Steel Structure နှင့် ငြမ်းဆက်စပ် ပစ္စည်းမျိုးစုံကို ဈေးနှုန်းနှင့် အရည်အသွေးမှန်ပစ္စည်းများကို ဖြန့်ချီပေးနေပါသည်။</p>
PRO 1 Home Center ကုမ္ပဏီမှ လူကြီးမင်းတို့ အတွက် အိမ်သုံး ၊ အဆောက်အဦးသုံး၊ ဟို တယ်သုံး၊ စားသောက်ဆိုင်သုံး ပစ္စည်းဖြစ်သည့် စတီးလ် ရေစည်နှင့် ရေတိုင်ကီ ( Steel Filter Tanks ) ကို တင်သွင်းဖြန့် ဖြူးရောင်းချ လျက်ရှိပါသည်။ ၄င်းရေစည်နှင့် ရေတိုင်ကီ ( Steel Filter Tanks ) သည် သေသပ်ပီး ဒီဇိုင်းဆန်းသည့် အပြင် Stainless Steel ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် အရည်သွေးကောင်းမွန်ပီး ကြာရှည်အသုံးခံပါသည်။ ဒါ့ကြောင့် လူကြီးမင်းတို့ အနေဖြင့် အရည်သွေးကောင်းမွန်ပီး ကြာရှည် အသုံးခံသည့် စတီးလ် ရေစည် နှင့်ရေတိုင်ကီ ( Steel Filter Tanks ) ကို ဝယ်ယူ အသုံးပြု လိုပါက PRO 1 Home Center ကုမ္ပဏီကို တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ် မှာယူနိုင်ပါသည်။
Advantage ; a, Saves Time &amp; Money, Simple Install &amp; Operation,(push connect by hands), Flexible&amp;Lightweight, For use with hot&amp;Cold water Applications Body: Brass O-Ring:EPDM Grab Ring:Stainless Steel Tube Support Liner:Polysulfone Finish:Natural Brass or Chrome Plated PEX COPPER CPVC Pipe ကို စတိန်းလက်စတီး၊ ကော့ပါး၊ ကြေးဝါ တို့ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပါသည်။ ၄င်းပစ္စည်းများကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် အချိန်နှင့် ငွေကြေး ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည်။ အရိုးရှင်းဆုံး ( push connect by hands )တပ်ဆင်နိုင်သည်။ Coupling/push fitting ပစ္စည်းမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။
4 Gas Burner with Cabinet -American Style Burner. -Piezoelectric igniter included. -With Flame – Failure Protection System. -Heat resistant handle.
ရေချိုးခန်းသုံး ဆပ်ပြာခွက်/ဆက်စပ်/ အပိုပစ္စည်းများကို အရည်အသွေးမြင့်စတိန်းလက်စတီး (304,316,) ဖြင့်ပြုလုပ်ပါသည်။ ၄င်းပစ္စည်းများကို တပ်ဆင်အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ကျန်းမာရေးအတွက် ဆောကြောသန့်စင်ဖို့လွယ်ကူသည်။ အချိန်ကြာ ရှည်စွာ အသုံးပြုနိုင်သည်။စတိန်းလက်စတီးအစစ်ဖြင့်ပြုလုပ်၍ ဖက်ရှင်ကျကျ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။